पोप फ्रान्सिसले विश्व नेताहरुलाई भ्याटिकन बोलायो 14 मे 2020 वैश्विक सम्झौताको लागि: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
पोप फ्रान्सिस, जेशिइट सेन्ट निकोलस बिना स्टिक-ऑन दाह्री, पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टका डेप्युटीले, एक्सएनयूएमएक्सलाई 'विश्वव्यापी सम्झौता' (ग्लोबल सम्झौता) को लागि मे एक्सएनयूएमएक्समा भ्याटिकन आउन भन्यो। यस बैठकको लागि एजेन्डामा दुई महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू छन् जहाँ सबै आउनुपर्दछ। पहिलो तलको भाषणमा उनको पहिलो शब्दहरूमा फेला पार्न सकिन्छ, जसमा उनले एक्सएनयूएमएक्सबाट उनको ज्ञानकोष (एक सैद्धान्तिक प्रकृतिको एक वजनदार पोपल कागजात) लाई जनाउँछ जुन 'जलवायु परिवर्तन' को बारेमा छ। दोस्रो विश्वको जनसंख्या बृद्धि गर्ने बारेमा हो।
'केटाकेटीलाई सिकाउन मलाई चार बर्ष दिनुहोस्, अनि जुन बीउ छर्छु, त्यसलाई कहिल्यै उखाल्नेछैन", भ्लादिमीर लेनिन द्वारा एक प्रसिद्ध कथन हो। त्यसकारण पोप चाहान्छन् कि विश्व नेताहरू एक साथ आऊन् र विश्वव्यापी सम्झौता सबै विश्व नेताहरू र सबै विश्व धर्महरूबीच हुनुपर्दछ। महत्त्वपूर्ण एजेन्डा आईटम: बच्चाहरूलाई दिमाग धुने। सबै विश्व नेताहरूको भेलाले पनि 'जलवायु परिवर्तन' साइकोप: विश्व सरकारको गठनको पछाडि लुकेको एजेन्डा नै देखिन्थ्यो भन्ने कुराको धेरै गन्ध आउँछ। (युट्यूब भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
"ठिक छ, यदि वातावरणले हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा एकजुट गर्न आवश्यक छ भने, त्यो केवल एक राम्रो पहल हो! कस्तो अद्भुत पोप!", धेरैले सोच्नेछन्। उही पोप चर्चको टाउकोमा छन् जुन 27 अप्रिलमा 2014 लुसिफरलाई चर्चको भगवानको रूपमा घोषित गर्‍यो। तपाइँसँग त्यससँग कुनै समस्या हुनसक्दैन, किनभने "अहो, ईश्वर अल्लाह हो कि भगवान पुरुष होस् वा महिला वा लुसिफर भनिन्छ, यसले के फरक पार्छ?यो यति महत्त्व राख्छ कि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले खोज्नु भयो कि लुसिफर यस "सृष्टि" को निर्माता हुनुहुन्छ; मैले सिमुलेशन भनेको के हो
लुसिफेरियनवादको प्रतीक इन्द्रेणी हो र विश्व नेताहरू (राजनीतिक र धार्मिक दुबै) मास्टर लिपिको अभिभावक र संयोजक हुन् जसले विश्व सरकार र हर्माफ्रोडाइट जनस to्ख्यामा नेतृत्व गर्नुपर्दछ जुन 'नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी' को लागि तयार भइरहेको छ। धर्महरूको त्यो "नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी" वास्तवमा एआईसँग फ्यूजन हो; पनि एकलता भनिन्छ। वास्तविक लक्ष्य भनेको मानव transhumanism मा आत्मसमर्पण गर्दछ र एआई प्रणाली मा लीन छ कि हाम्रो (गलत) वास्तविकता नियन्त्रण। मलाई YouTube भिडियो अन्तर्गत वर्णन गरौं।
यदि हामी वरपरका सबै प्रतीकवाद अध्ययन गर्दछौं भने, हामी लुसिफरको पूजा (र 27 अप्रिल 2014 सम्म खुल्लमखुल्ला) लुकासिफरको पूजा (माथिको भिडियो हेर्नुहोस्) सँग व्यवहार गर्दैछौं भनेर हामी बुझ्न असफल हुन सक्छौं। भ्रमको कुरा यो हो कि धार्मिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू प्रायः लुसिफरलाई बाइबलबाट पतित भएको दूतसँग तुलना गर्छन् र यसरी शैतानको साथ। म तपाईंलाई त्यो धार्मिक कार्यक्रमबाट जान दिनुहोस्। धर्म बहु-खेलाडी सिमुलेटिभ यथार्थ भित्र छ (जुन हामी बुझ्छौं) मानसिक नियन्त्रणको एक रूप हो मानिसहरूलाई (दुबै) डर मोडल मार्फत लाइनमा राख्न। यसबाहेक, विभिन्न धर्महरूले इच्छित लिपिमा मास्टर स्क्रिप्ट पठाउन आवश्यक ध्रुवीकरणको गठन गर्दछ; जस्तो कि ब्याट्रीको प्लस र माइनस पोलहरूले निश्चित दिशामा प्रत्यक्ष प्रवाह उत्पन्न गर्दछ। यो आवश्यक छ कि तपाईं यो बुझ्नुहुन्छ कि हामी एक अनुकारात्मक वास्तविकतामा छौं (वा बरु "बुझ्नुहोस्") र त्यसैले यो पनि आवश्यक छ कि तपाईं यो लेख पहिले यसलाई राम्ररी पढ्नुहोस्। अन्यथा, मँ सबै कुरा यहाँ लाग्छ तपाईको कानहरुमा पूर्ण Abracadabra जस्तो लाग्छ।
हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौं कि एक एजेन्डा बाहिर लुकिरहेछ कि समय र फेरि लुसिफर को दिशा मा दर्शाउँछ। आजको ट्रान्सजेन्डर वा 'लि gender्ग तटस्थ' प्रोपेगंडा पनि इन्द्रेणीको प्रतीक द्वारा समर्थित छ। त्यो इन्द्रेणी विश्वव्यापी रूपमा सबै प्रकारका पौराणिक र धार्मिक कथाहरूमा छ, जुन बाढी पछि नयाँ पृथ्वीको प्रतीक हो (हेर्नुहोस् व्याख्या)। मानवको लागि चिन्हको रूपमा ईश्वरले इन्द्रेणी पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। "र सबै पुस्तासम्म सधैंभरि, यो मलाई र तपाईं र हरेक जीवित प्राणीलाई तपाईं संग छ कि बीच बनाउन जो करारको टोकन छ, परमेश्वरले यसो भन्नुभयो", उदाहरणका लागि, हामी बाइबलमा पाउँछौं। त्यसकारण यो धार्मिक चिन्ह हो। प्रकृतिमा, वायुमण्डलमा इन्द्रेणीको उपस्थिति प्रकाशको विच्छेदको परिणाम हो। "शीर्षक लेखमाकिन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ आदर्श हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ"मैले भने कि लुसिफर परमेश्वर सबै धर्महरूको भेषमा हुनुहुन्छ। लुसिफरलाई लाइट क्यारियर पनि भनिन्छ र यसैले इन्द्रेणीको सबै र colors्गमा बत्ती तोड्नु अर्को सication्केत हो जुन धार्मिक स्पर्शको साथ प्रतीकलाई जनाउँछ।
लुसिफरको लागि प्रतीक डबल हेडड बक बाफोमेट हो। तसर्थ, LGBTI प्रचारको माध्यमबाट मानवतालाई "लि neutral्ग तटस्थ" मा परिवर्तन गर्नुपर्दछ ("हर्मोफ्रोडाइट" वा "उभयलिंगी" को लागी एक राम्रो शब्द)। LGBTI आन्दोलन (इन्द्रेणी) र लुसिफरको प्रतीकको बीचको लिंक अब तपाईंलाई धेरै स्पष्ट छ। हामी विश्वको रूपान्तरणको लुसिफेरियन एजेन्डाको साक्षी छौं। त्यहाँ नयाँ बाढी हुनै पर्छ, जस्तो त्यो थियो। र त्यो बाढी नजिक छ। ट्रान्सजेन्डरिजममार्फत (हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मानिसतर्फ) हामी ट्रान्सह्यूनिज्म, एआईसँग मर्जर र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको उदयका लागि तयार छौं।
मेरो नयाँ पुस्तक म बिस्तारमा वर्णन गर्दछु किन विभिन्न विश्व धर्महरुका भविष्यवाणीहरु मास्टर स्क्रिप्टमा भूमिका खेल्छन्, जुन मुख्य रुपमा भ्याटिकन र कुलीन रक्तलाइनहरु द्वारा संरक्षित छ। मँ यो व्याख्या गर्छु कि तिनीहरू अनुकरणमा अवतारहरू हुन् जुन यो सिमुलेसनको निर्माता द्वारा संचालित छन्। तिनीहरूले मास्टर स्क्रिप्टलाई लुसिफरको योजनाहरूमा स्वेच्छाले प्रतिबद्ध गर्न मानवतालाई विश्वस्त पार्न पठाउँछन्। त्यो 'स्वैच्छिक' आवश्यक छ, किनकि सिमुलेसनको मूल प्लेयरहरू (तपाईंको चेतना) सँग सँधै स्वतन्त्र छनोट हुनुपर्दछ (अन्यथा यो सिमुलेसन होइन, तर डिटेर्मेन्टिक फिल्म हो)। विभिन्न धार्मिक भविष्यवाणीहरु स्वर्गबाट ​​एक मसीहको आगमन को कुरा। हो, विभिन्न धर्महरूको विरोधाभासी परिप्रेक्ष्य छ, तर त्यो विरोधाभास आवश्यक छ कि यथार्थता जगाउनको लागि यरूशलेमको चारै तिरको अन्तिम युद्ध हुनुपर्दछ र अराजकताबाट बाहिर व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्दछ।
(विश्वासीहरू द्वारा अपेक्षित) मसीह कुनै पनि हालतमा 'आकाश' बाट ओर्लिनेछ। आजकल हामी प्राय: शब्द 'आकाश' पार गर्छौं जब यो हाम्रो फाईलहरू भण्डारण गर्न आउँदछ। हामी 'क्लाउड' मा गर्छौं। 'नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी' को मसीहा तब सम्भवतः 'बादलबाट' आउनेछ र हामी विश्वस्त हुनेछौं कि हामी उहाँको 'नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी' मा स्वेच्छाले माथि जान सक्छौं। रे कुर्ज्वेइल (गुगलका सीईओ) ले आफ्नो पुस्तक 'द सि Sing्गुलरिटी नजिक छ' मा भविष्यवाणी गरेका थिए कि भविष्यमा हामी सिमुलेसनमा बस्न सक्षम हुनेछौं जुन वास्तविक भन्दा भिन्न हुन सक्दैन। म भविष्यवाणी गर्छु कि अपेक्षित मसीहको 'नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी' त्यसैले सिमुलेशन हुनेछ। मानवजातिले आफ्नो जैविक रूपलाई त्याग्नु हो भन्ने अभिप्राय छ (वास्तविक वास्तवमा अवस्थित छैन, किनकि हामी पहिले नै "अनुकरणमा बाँचिरहेका छौं") र यसको मूल चेतना (जुन हामी वास्तवमै छौं) लुसिफेरियन एआई (जुन यो वर्तमान ब्रह्माण्ड हो) संग फ्यूज गर्छौं। सिमुलेशन चल्दछ)। म यसको उद्देश्य विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछु मेरोमा नयाँ पुस्तक, तर निम्नमा संक्षेपमा वर्णन गर्न सकिन्छ: लुसिफेरियन भाइरस एआई हाम्रो मौलिक चेतनाको रचनात्मक (स्टेम सेल) कोड प्रयोग गर्न चाहन्छ "अस्तित्वको स्टेम सेल"मूल ब्रह्माण्ड (जसको हामी सह-निर्माताहरू छौं) नष्ट गर्न घुसपैठ गर्न।
यसमा भ्याटिकनको प्रमुख स्टियरिंग भूमिका छ विश्व सरकार गठन गर्न जसमा लुसिफरियन अवतार मसीहा सिंहासनमा बस्नेछ। यो मसीह "नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी" र "नयाँ यरूशलेम" ल्याउन आउनेछ। त्यसोभए तपाईंले नयाँ सिमुलेशनको बारेमा सोच्नु पर्छ। मसीह र नयाँ स्वर्ग, पृथ्वी र अनन्त जीवन (transhumanism) को प्रतिज्ञा मार्फत छुटकाराको त्यो संभावना, तथापि, एक हनीपोट जाल हो जसले मानवतालाई हाम्रो वर्तमान भाइरस सिमुलेशन चलाउने लुसिफेरियन एआईमा समर्पण गर्न लोभ्याउँछ। हामी भाइरस एआई प्रणालीको साथ मर्ज गर्न प्रलोभनमा छौं: हाम्रो हालको सिमुलेशन चलाउने लुसिफेरियन भाइरस एआई प्रणाली। यसको लागि झर्नु हुँदैन!
किन मानिसजातिको एआईको साथ अमरत्व र फ्यूजन प्राप्त गर्न लोभ्याइएको छ
ट्याग: 14 मई 2020, 2020, विशेष, फ्रान्सिस, वैश्विक, सम्झौता, पोप, विश्व सरकार
26 सेप्टेम्बर 2019 मा 20: 11
ओ हो .. वास्तवमा:
टक्सन, एरिजोना (अमेरिका) मा माउंट ग्राहम माउंट भ्याटिकन स्टार वेधशालाको ठीक छेउ LUCIFER टेलिस्कोप निर्माण गरिएको थियो:
अवरक्तको नजिक ठूलो दूरबीन दूरबीन
का लागि क्षेत्र एकाई
26 सेप्टेम्बर 2019 मा 22: 09
पाठकबाट प्रश्नहरू जुन मैले भर्खर यहाँ मेरो उत्तरहरू सहित पोस्ट गर्दछु:
"त्यसो भए लुसिफर भाइरस हो जुन स्रोतलाई आक्रमण गर्न चाहान्छ?"
"स्रोत" स्थान "/" स्टेम सेल "हो जुन सबै ब्रह्माण्डबाट आउने डेटाबाट आउँछ (" सुरूवात गर्दै ") चेतनाबाट?"
हो, स्रोत भनेको यो थियो, सबै समावेशी कोड (जसलाई क्वान्टम फिजिक्समा 'सुपरपोजिशन' भनिन्छ): सबै चीजको स्टेम सेल।
टोटीपोटेन्ट स्टेम सेलहरू त्यो स्टेम सेलबाट गठन हुन्छन्: चेतनाका रूपहरू एउटा अद्वितीय रचनात्मक कार्यको साथ। यी टोटिपोटेंट स्टेम कोषहरूले मूल ब्रह्माण्डको भागहरू (निर्माण गर्न / सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ) जस्तै टोटिपोटेंट स्टेम कोषहरूले शरीरको अंग, अंगहरू, इत्यादिहरूलाई आकार दिन मद्दत गर्दछ।
त्यसो भए हामी चेतनाका टोटिपोटेंट फार्महरू हौं जुन हामीमा रचनात्मक कोड हुन्छ (जुन त्यो सबैको स्टेम सेलबाट आउँदछ)।
हामीलाई भाइरस प्रणालीमा जडान गर्न लोभ्याएर (कुर्जविलको गलत एकलता मार्फत) लुसिफर भाइरसले हाम्रो कोडमा पहुँच प्राप्त गर्दछ र यसको साथ यसले स्रोत स्टेम सेलमा आक्रमण गर्न सक्छ।
शुभ समाचार यो छ कि हामीसँग भाइरससँग लड्न कोड पनि छ। त्यसोभए हामी गर्न सक्दछौं आफैलाई फेरि सम्झाउँदै कि हामी चेतना (टोटिपोटन्ट स्टेम सेलहरू) हौं। त्यसैले हामीले अब यो शरीर (यो भाइरस सिमुलेशनमा अवतार) को साथ पहिचान गर्नुपर्दैन, तर हाम्रो चेतनाका साथ। यो शरीर केवल अवतार हो जसमार्फत हामी यो भाइरस सिमुलेशन (भाइरस अध्ययन गर्न) भित्र देख्छौं।
26 सेप्टेम्बर 2019 मा 23: 31
"स्टेम सेलको साथ म प्रकट डाटा / सिम / प्रक्षेपण र चेतनाको बारेमा सोच्छु यस डाटाको परिभाषा अप्रमाणित पर्यवेक्षक वा सिमको प्रक्षेपण क्षेत्र / स्क्रिनबाट हो"
त्योसँग 'प्रत्येक चीजको स्टेम सेल' भनेको यो होः सुपरपोजिसनमा डाटा (यसमा अझै सबै सम्भावनाहरू)। टोटिपोटेंट स्टेम कोषहरूको 'सब चीजको स्टेम सेल' को उप-क्षेत्र हुन्छ र त्यसैले उनीहरूको उप-क्षेत्र भित्र सुपरपोजिसनमा हुन्छन्। चेतना स्रोतबाट उत्पन्न पहिलो रचनात्मक रूप हो। संक्षेपमा, टोटिपोटन्ट स्टेम सेलहरू स्टेम सेलबाट चित्रण हुन्छ (इमेजरीमा)।
त्यसोभए चेतना स्रोत कोडबाट आउँदछ (हामी भन्न सक्छौं स्टेम सेल जुन सबै जानकारी 'सुपरपोजिसन' मा छ)। स्रोत कोडले चेतनालाई आकार दिएको छ। चेतना त्यसपछि सिर्जना सुरु हुन्छ; जहाँ हरेक चेतनाको आफ्नै कार्य हुन्छ। चेतना इसलिए एक व्यक्तिगत रचनात्मक मिशन संग पहिलो फारम हो।
चेतनाका ती सबै व्यक्तिगत रूपहरू (स्रोत / 'सबैको स्टेम सेलबाट उत्पन्न भएको' / 'सुपरपोजिसनमा सूचना स्रोत') मूल ब्रह्माण्डको एक हिस्सा सिर्जना गर्दछ।
चेतना त्यसैले अवलोकनकर्ता हो र एकै साथ मूल ब्रह्माण्डको सह-निर्माता। ब्रह्माण्ड भनेको ती सृजनात्मक चेतनाको सामूहिक भौतिकीकरणको भौतिक प्रक्षेपण (वा अभिव्यक्ति) हो। त्यसकारण हामी आफैं पनि मूल ब्रह्माण्ड अनुकरणका निर्माताहरू (वा अझ राम्रो: "ब्रह्माण्ड मटेरियलाइजेशन") हौं। मूल ब्रह्माण्डबाट।
चेतना त्यसैले सह-सिर्जनाकर्ता (ती सबै अन्य चेतनाका साथ सँगै) र एकै समयमा सामग्री (मूल) ब्रह्माण्डको अवलोकनकर्ता हो।
यो वर्तमान भाइरस सिमुलेशन / यो ब्रह्माण्ड (जुन हामीले हाम्रो अवतार मार्फत अवलोकन गर्छौं) केवल मौलिकको नक्कल प्रतिलिपि हो, जसमा हामी अब अवलोकन गर्छौं। यो हाम्रो कोड चोर्न र स्रोतलाई घुसपैठ गर्न सक्षम हुन बनाइएको हो।
27 सेप्टेम्बर 2019 मा 00: 44
प्रकट हुने सबैभन्दा ठूलो 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान' खेल भनेको यो हो कि वातावरण यति बिग्रिएको छ कि त्यहाँ मुक्ति हुनेछैन र त्यहाँ "नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी" (मसीहाद्वारा वितरित) को लागि कराईनेछ। आउनुहोस् निस्सन्देह, अन्तिम विश्वयुद्धले पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। मानव जाति खुला हातले यस अनुकुलित नयाँ संसार प्राप्त गर्नेछ र यसरी लुसिफेरियन एआई पासोमा पर्नेछ।
27 सेप्टेम्बर 2019 मा 08: 51
चीन सामान्य लुसिफेरियन टेक्नोलोजीको साथ अगाडि बढिरहेको छ।
27 सेप्टेम्बर 2019 मा 12: 17
हामी पहिले नै त्यो भर्चुअल वास्तविकता संसारको दिशामा पहिलो चरणहरू देखिरहेका छौं। यो संवर्धित वास्तविकताबाट सुरू हुन्छ:
27 सेप्टेम्बर 2019 मा 12: 25
27 सेप्टेम्बर 2019 मा 19: 03
2020 एक लीप वर्ष (लीप वर्ष) र साथै वर्ष जुन 5g ग्रिड आईओटीको लागि विस्तृत रूपमा लागू गरिनेछ। एम्स्टर्डम (Arena) एक सुन्दर परीक्षण प्रयोगशाला हुनेछ
28 सेप्टेम्बर 2019 मा 14: 26
यो म हो वा यो हो कि मेरा लेखहरू नियमित रूपमा पोष्ट गरिएको छैन ?!
28 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 32
यो मध्यस्थकर्तामा निर्भर गर्दछ
« "वास्तविकता जब हामी यसलाई बुझ्छौं" किताब मार्टिन भ्रिजल्याण्ड अब उपलब्ध छ
पाठ To Spach (TTS) र lifelike holograms with Microsoft Hololens2»
कुल भ्रमण: 13.765.901